के तपाई मनपराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ? हिड्ने र बस यात्रा? त्यसपछि यो पोस्ट लागि छैन! हामी सबै भन्दा राम्रो तरिका हो छत छत वा क्याफे मा शैम्पेन sipping द्वारा युरोप गरेको प्रतिष्ठित साइटहरु केही हेर्न लाग्छ. यहाँ केहि उत्कृष्ट रूफटप रेस्टुरेन्टहरू र क्याफेहरू युरोपमा छन् ताकि तपाईं शैलीमा देख्न सक्नुहुनेछ.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो छत रेस्टुरेन्ट र क्याफे: Atlante तारा होटल - रोम, इटाली
जब मा रोम, तपाईंले सबै सुन्दर र प्राचीन स्थानहरू देख्नु आवश्यक छ - जस्तै कोलोसेम वा ट्रेवी फाउंटेन. तर तपाईं पनि छ एउटा सुन्दर दृश्य रमाइलो शहर को. र, Atlante तारा होटल को छत पल्ट भ्रमण गर्दा तपाईं दुई देशहरू एक दृश्य छ. यसैले हामी सोच्छौं कि यो युरोपमा सब भन्दा राम्रो छाना रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू मध्ये एक हो!
बाट छिटो रेल लन्डन रोम को चारैतिर लिनुहोस् 14 घण्टा, करीव एक दूरी कवर 1,434 किलोमिटर. त्यहाँ मा बारम्बार सेवाहरू छन् रेल मार्ग लन्डन र रोम बीच. यस यात्रा को लागी ट्रेनहरु सामान्यतया वरिपरि बुकिंग को लागी खुला छ 12 महिना अग्रिम. यदि बुकिंग अझै तपाईंको मितिहरूको लागि खुला छैन भने तपाईं एक ईमेल प्राप्त गर्न बुकि alert अलर्ट सेट गर्न सक्नुहुनेछ जुन सस्तो टिकट तपाईंको लन्डनबाट रोमको लागि ट्रेनको लागि उपलब्ध छ।. प्रयोग एक ट्रेन सेव छिटो र सजीलो अर्डर गर्न!
मा सबै भन्दा राम्रो outlooks एक लागि पेरिस, को Galeries Lafayette विभाग स्टोर को छत सम्म टाउको. सात तल्लाहरु, यो 1500m छत पेरिस माथि साँच्चै प्रभावशाली 360 ° दृश्य प्रदान गर्दछ. ओपेरा हाउस नजिक दायरामा छ र एफिल टावर यसको पृष्ठभूमि छ. तर दृश्य बारेमा मात्र, तर टेरेसमा आधुनिक र स्लिम रूफटप बार पनि छ जुन क्यूब बार भनिन्छ.
खुला-हावा र सेट मा प्राकृतिक, छत को छाया मा सूर्य र थप ढाकिएको क्षेत्रमा दुवै सीट प्रस्ताव. को छत पल्ट देखि, तपाईं एक चिसो बियर आदेश गर्न सक्छ, केही पेरिसियन नाश्ता साथ ताजा ककटेल. यो पक्कै पनि युरोपमा सबै भन्दा राम्रो रूफटप रेस्टुरेन्टहरू र क्याफेहरू मध्ये एक हो, त्यसैले एक सीट लो राम्रो समय मा हुन!
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो छत रेस्टुरेन्ट र क्याफे: एरिया होटल उच्च नोट स्काई बार - बुडापेस्ट, हंगेरी
एरिया होटल उच्च नोट स्काई बार बुडापेस्ट Buda र किरा को एक महान 360 डिग्री दृश्य प्रदान गर्दछ. यो किरा को दिल मा स्थित छ, बस एउटा ढुङ्गा गरेको सेन्ट देखि फाल्नु. स्तिफनसले Basilica. यो आकर्षक स्टाइलिश पट्टी धेरै आराम अनुभूति छ, र यो संग बुडापेस्ट आनंद सिद्ध तरिका हो आफ्नो परिवार र मित्र.
को रेल लन्डन बाट यात्रा बुडापेस्ट सुरक्षित छ, सजिलो र किफायती र बस लिन्छ 24 घण्टा, पेरिस गर्न Eurostar र उच्च गतिको TGV पेरिस देखि म्यूनिख गर्न द्वारा, त्यसपछि राति निद्रामा बुडापेस्ट. वा त्यहाँ पेरिस र मार्फत जडानहरू म्यूनिख, वा ब्रसेल्स मार्फत, कोलोन & भियना.
1881 प्रति SAGARDI को रेस्टुरेन्ट छ केटालोनिआ को इतिहास संग्रहालय, बार्सिलोना को पोर्ट अनदेखी शहर मा एक अद्वितीय ठाउँ र भू-मध्य गर्न सम्पूर्ण समर्पित भोजन, समुद्र देखि भूमि. यो अनुभव Indianes को छत मा पूरा भएको छ, समकालीन छत ककटेल पट्टी बार्सिलोना को पोर्ट अनदेखी.
यो बाट यात्रा गर्न सजिलो छ बेलायत गर्न रेल द्वारा स्पेन. बिहान Eur one एकतर्फी वा £ return one वापसी बाट २h20 मा पेरिसको लागि एक बिहान यूरोस्टार, Gare de Lyon मा उल्लेखनीय ट्रेन Bleu रेस्टुरेन्ट मा खाजा, त्यसपछि दिउँसो डबल डेक TGV द्वैध फिगरेस लाई (लागि साल्भाडोर Dali संग्रहालय), जिरोना & बार्सिलोना देखि € 39 प्रत्येक तरिका. *मूल्यहरु परिवर्तनको विषय.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-restorses-cafes-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#BestCafes #BestEuropeRestटका #सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्ट #क्याफेभ्यू #रेस्टुरेन्ट दृश्य #छत europetravel longtrainjourneys Tranride रेल यात्रा